कोरला नाका पिच भएपछि कुश्मा सेण्टर बन्छ,व्यापारीको भबिष्य सुनिचित छ नआतिनुहोस–गोविन्द् आचार्य ।Merojilla.com – MeroJilla.com
पछिल्लो समयमा यहा बैंकहरु खुल्ने क्रम बडेको छ ।जिल्लाको सदरमुकाम कुश्ममा सञ्चालनमा रहेका बैंकहरु गाउँगाउँमा शाखा बिस्तार गर्दैछन । अशिले बैंकको अवस्था कस्तो भएको छ ? आर्थिक कारेवार के कस्तो छ ? कुश्ममा करिव पाँच बर्ष अगाडीदेखि सञ्चालनमा आएको स्थापीत वैंक गोलोवल आई एम ई बैंकका प्रवन्धक गोविन्द् आचार्य संग मेरो जिल्लाकर्मी रामकृष्ण लामिछानेले गरेको संवादको अशं यसप्रकार छ ।
–गोलोवल आई एम ई बैंकका वर्तमानमा कसरी चलेको छ ?
हाम्रो बैंकको शाखा कुश्माको धनेश्वर चोकमा छ । यो स्थापना भएको पाँच बर्ष भयो । बैंकले अहिले सम्म यस कुश्मा लगायत यहाँका कुनाकुनामा साना व्यवसायमा लगानी गर्दै आएको छ । एस.एमी,अटोलोन, होम लाने लगायतका कर्जा दिदै,निक्षेप दिदैं आर्थिक कारोवार गर्दै आएको छ ।
–तँपाईको यस बैंकका ग्राहकहरु के कति हुनुहुन्छ ?
यसमा करिब पाँच बर्षमा पाँचहजार निक्षेपकर्ता हुनुहुन्छ । अन्य कर्जा उपभोग गर्ने दुई सय जना हुनुहुन्छ । रेमिटान्स् प्रयोग महिनामा करिव ५,६ सय हुनुहुन्छ राम जी ।
–तँपाईहरुले बैंकवाट के को आधारमा लोन दिनुहुन्छ प्रबन्धक ज्यु ?
कर्जा लगानी गर्दा मानिसहरुमा कस्तो बुझाई छ भने एउटा लालपुर्जा लिएर आउने अनि मेरो यति जमीन जग्गा छ भन्ने मलाई यती पैशा दिनुहोस् भनेर यसरी आउने गर्नुभएको छ । यो ठिक होईन बैंकी पहुँच नपुगेको हो जस्तो हामीलाई लाग्छ । उहाँहरुमा बैंकी प्रशिक्षण आवश्यक मैले देख्छु । लगानी गर्दा के हो भने जुनसुकै बैंकले पनि क्षेत्र हुर्नपर्छ ।जस्तो व्यवसायमा लगानी गर्दै छ भने उसले व्यवसायको भोलुम हेर्नुपर्छ,त्यसमा रहेका प्राईमरी कोल्याटरर्ल स्टक भन्छ त्यस्मा के के छन,कत्ति छन र्हेनुपर्छ । जग्गाजमीन भनेको सेकेण्डरी कोल्याटरलाई छुट्टै सेक्रेटीमा हर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई ।
–संघियता संगै यहाँको व्यापार घट्दै गर्दा बैंकका ग्राहकहरुमा कारोवार तर्फ उत्साह कम भएको हो ?
यो के छ भने संघियतासंगै गाउँगाउँमा स्थानीय सरकार भन्ने एजेण्डा छ । यो एजेण्डालाई हेर्दा कुश्मामा मात्र नभई बाग्लुङ,म्यादी लगायतका हरेक क्षेत्रमा यसको असर छ,अन्योलता छ भन्ने मेरो बुझाई छ । तथापी यो सुरुवाती चरणमा त्यस्तो देख्एिको छ । स्थानीय स्तर यहाँका स्थानीय स्तरमा यी बैंकहरु पुग्नुपर्छ अव असारको मसान्त सम्म सवै बैंक र अन्य कार्यलयहरु स्थानीय तहमा स्थापना भईसकेका हुनेछन् । अहिले कुश्मा बजारको बिजनेस् डाईभर्सन भएको हामी देख्छौं,तथापी यो क्षणीक मात्रै हो । अवको एक,दुर्ई बर्षमा कुश्माको व्यापार उठ्छ,व्यापारीहरु आत्तिनु पर्दैन । यहाँका लगानीकर्ताहरु व्यवसायहिरुका दिन आउँछन । यो कोरला नाका जाने बाटो जब पिच हुन्छ, यो सदरमुकाम कुश्मा एउटा सेण्टरको रुपमा कायम हुन्छ । यस्को भबिष्य अन्योल छैन । म एउटा बैकीङ व्यवसायको हिसावले उहाँहरुलाई नआतिन आग्रह गर्छु । अन्य व्यापारका पुवाधारहरु धेरै छन । यहाँका लामा पुल,बञ्जी जम्प,स्थापीत होटल जस्तै बन्जु होटल,बन्दना होटल लगायतका धेरै छन । यहाँका व्यवसायहरु आतिहाल्नुपर्ने छैन,केही समय मात्रै धैर्य र्गनुहोस तँपाईहरुका दिन आउँछन ।
–दैनिक यहाँ बैकहरु आउँदै छन । अव स्थापना हुने बैंकहरु कसरी जानुपर्ला ?
राम्रो सान्दर्भीक प्रश्न अव बैंकहरु कुश्मा वजार फोकस भएर मात्रै सञ्चालनमा आउनुहुन्छ । अव गाउँ केन्द्रत हुनु आवश्यक छ । यहाँको पाङ,खुर्कोट बाग्लुङकै भए पनि नारायण स्थान नारायणथान केन्द्रत भएर ती ग्राहकहरुलाई छुने गरी गएमा राम्रो भबिष्य छ ।
–धेरै बैंकहरु गाउँ केन्द्रित भए गोलोबल बैंक गाउँ जान्न ?
अवश्य हो रामकृष्ण जी । पर्वतको हाम्रो शाखा कुश्मामा छ । अन्य जिल्लामा हर्र्ने हो भने हाम्रो बैंक सवैभन्दा पहिला ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित छ । तँपाईको एक सय २२ वटा बैंकहरु आधुनिक बैकहरु छन । तीनका पनि अन्य शाखाहरु बिभिन्न क्षेत्रमा केन्द्रित भएका छन् । अव हामी शाखा रहित बैंकहरु सञ्चालनान ल्याउदैं छौं । यही पर्वतको पाङका हामी चाडौं जाँदै छौं रामकृष्ण जी ।
–बैंकहरु मर्ज गर्नुपर्ने समय आएको हो ?
हो यो नेपाल राष्ट्रि बैंकले ल्याएको नयाँ नीती हो । अव नीजी बैकहरुले ८ अर्व पु¥याउनुपर्ने पोलीसी ल्याएको छ ।जसले आफनो पुजीं पु¥याएको छैन ती बैकहरु मर्ज हुन्छन ।
–अश्वच्छ प्रतिस्पर्धा बैंकहरुमा भएको छ,तँपाईको धारण के छ ?
बैकले ब्याज दिने क्रम्मा मनपरी ब्याज दिन पाईन्न ।बैकको एसोसिएसले मुद्धती खातामा ११ प्रतिस्पर्धा दिन नपनईने निया लागु गरेको छ ।अव सवै बैंक प्रकार हुन्छ ।
–अन्तयमा के भन्न चाहानुहुन्छ ?
मेरो अन्तिम कुरा के छ भने हामी लाखै कमायौ भने त्याृेृ खर्च होला ।तसर्थ हामीले हाम्रो बैंकमा आएर वा अन्य बैंकमा बचत खाता खोलेर बचत गरौं ।